Siyaad Barre oo lagu soo saarey bayaankii koowaad ayaa markii uu u hogaan-sami waayey dalka u horseeday burbur iyo colaad.
MUQDISHO, Soomaaliya – Iyaddoo mustaqbalka Soomaaliya uu shaki sii gelayo sabab la xiriirta in ay waqtigooda ku dhici karaan doorashooyinka soo aadan, aqoon-yahano iyo indheer-garad ayaa soo saarey bayaan "qaylo-dhaan qarankii labaad" taariikhda guud ahaan waddanka.
Bayaanka oo nuqul kamid ah loo diray xafiisyadda madaxweynaha dalka, ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay iyo wakiilada Beesha Caalamka ayaa xoojinaya dooda ka taagan siyaasada gudaha, wuxuuna qeexayaa dhabaha ay tahay in loo mari karo xalka "xaaladda cakiran".
"Hannaankii siyaasaddeed ee dalku wuxuu noqday mid hareer marsan hab ku dhisan dowlad-wanaag (daahfuraan iyo islaxisaabtan) iyo istiraatiijiyad guud oo taabba-gelinaysa dhismo dawlad saldhigeedu yahay u adeegdida ummadda Soomaaliyeed," ayay sheegeen.
Saxiixayaasha bayaanka ayaa isugu jira aqoonyahano iyo wax-garad qayb ka ahaa qaylo-dhaantii koowaad oo soo baxday bishii May sanadkii 1990-kii, waxaana loo diray madaxweyne Maxamed Siyaad Barre oo ay u jeediyeen "talooyin dalka looga badbaadinayey dagaal sokeeye".
Hoos ka daalaco bayaanka
Ku: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya: Md. Maxamed Cadulaahi Maxamed Farmaajo
Muddo hadda laga joogo 30 sannadood, ayaa muwaadiniin Soomaliyeed soo saareen “Bayaanka Muqdisho ee 1-aad (Manifeesto 1), xilligaa oo ku aaddaneyd bishii May 1990. Bayaanka 1aad waxa uu xambaarsanaa talooyin lagu badbaadinayo dalka. Soddon sano kadib, waxa uu dalku marayaa marxalad iyo xaalad la mid ah tii uu Bayaankii 1-aad uu ka digay 30 sannadood ka hor. Ma filayno in muwaadin kasta oo Soomaaliyeed, uu maanta indhaha ka qarsan karo xaaladda cakiran ee dalku ku sugan yahay . Waxaa marag ma doonto ah in maanta dalku marayo marxalad xasaasi ah oo kala-guur ah, iyada oo uu mugdi badan hareereeyey geedi-socodkii dib-u-yagleelidda hannaankii dowladnimo.
Maqnaanshaha dowlad ka tarjunta rabitaanka shacbiga, waxay horseedday oo caqabad weyn ku noqotay, shakina gelisay qabsoomidda doorashada 2020/2021, dhismaha Ciidan Qaran, Sugidda Amniga dalka, dhameystirka Dastuurka, la dagaalanka musuqmaasuqa, , isku milanka Golaha Baarlamaanka iyo Golaha Fulinta, maqnaashaha Maxkamadda Dastuuriga, dhamaytir la’aamta xeerarkii iyo shuruucdii dalka, gelitaanka hashiisyo caalmi ah oo qarsoodi ah, oo aan la horkeenin Baalrmaanka Federaalka. Taasoo ay dheer tahay gaabiska iyo dibudhaca ragaadiyay dedaaladda lagu horumarinayo qaab-dhismeedka hay’adaha Dowladda Federaalka iyo qorshe waaqici ah oo ku aadan wadahadalka u dhexeeya Dowladda Federaalka iyo Soomaalilaand.
Haddaba annaga oo ah dadka magacyadooda hoos ku qoran yihiin waxaan u aragnaa in xaaladda Soomaaliya kal dhow iyo mid dhexeba dhanka Siyaasadda iyo Amniga ay ku jirto degganaan la’aan ku xayndaaban dib u dhacyo badan oo is biirsaday. Danaysiga, musuqa, dulmiga baahsan iyo cadaalad-darridu waxay dhalisay in ay hor-joogsato qorsho walba oo lagu gaari lahaa dhismo dowlad ka tarjunta islamarkaana u adeegta shacbiga Soomaaliyeed. Waxa aanu ugu baaqaynaa dhamaan ummadda Soomaaliyeed in ay u itaagto badbaadinta dalka, islamrkaana taageeraan the baaqa Manifesto II.
In la joojiyo xadgudubyada ka dhanka ah hannaanka Federaalka iyo Dimuquraadiyadda, ee ku dhisan dib-u-heshiisinta iyo talo-wadaagga, kaasoo ay ummadda Soomaaliyeed ku heshiisay 20 sannadood ka hor, lagana fogaado siyaasadda ku salaysan wada tashi la’aanta baalmarka dastuurka dalka iyo nidaamak federaalka
In kulan wadatashi oo dhexmara Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada (political agreement), lagaga arinsado qabsoomidda doorashada 2020/2021.
Liiska saxiixayaasha bayaanka 2aad ee "Qaylo-dhaan Qaran"
Bayaankii koowaad ee "Qayl-dhaan Qaran" ayaa loogu dalbaday Siyaad Barre in uu xukunka dego, waxaana lagu eedeeyay in uu maleegay dambiyo ka dhan ah dadka Soomaaliyeed. Balse markii uu diidey in uu xafiiska baneeyo, waxaa waddanka uu lugaha la galay colaad sokeeye.
Farmaajo oo ka falceliyey isbitaalka loola cararay boqorka Sacuudiga
Soomaliya 21.07.2020. 10:00